सरकार आलोपालो चलाउने बाबुरामको प्रस्ताव
११ वैशाख, काठमाडौं । नयाँ शक्ति अभियानका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले कार्यकारी निर्वाचित सरकार प्रमुख रहने संवैधानिक व्यवस्था गरेर त्यसमा आलोपालो प्रणाली अपनाइनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । संविधान संशोधन मार्फत संविधानका बाँकी मुद्दाहरु समाधान गरिनुपर्ने उनको तर्क छ । बताएका छन् । तराई मधेसका विभिन्न जिल्लाको भ्रमण गर्ने क्रममा डा। भट्टराईले जनस्तरबाटै यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । नेपालमा जनजाति, मधेसी र खस,आर्य तीनवटा…विस्तृत समाचार »
एमाओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय एकता अभियान आवश्यक : अध्यक्ष दाहाल
११ वैशाख , दाङ । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय एकताको अभियान थाल्न आवश्यक भएको बताएका छन् । नेपाल बुद्धिजीवी सङ्गठन दाङको वार्षिक भेलाको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उनले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशिता लागू गर्न बृहत्तर राष्ट्रिय एकता आवश्यक भएको बताए ।‘जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गरिसकेको हैसियत र अहिलेको आवश्यकताको आधारमा राष्ट्रिय एकताको नेतृत्वले एमाओवादीले नै गर्छ,’ उनले भने– ‘पुँजीवादी…विस्तृत समाचार »
एकताको सन्देश दिने प्रचण्ड र बादलको तयारी असफल
१० वैशाख काठमाडौं । बहुमतले निर्णय गरेर भएपनि वैशाख १० गते लेनिन दिवसको अवसरमा प्रचण्डसँग पार्टी एकताबारे सन्देश दिने तयारी गरेका बादलको तयारी रोकिएको छ । बादलले यसका लागि उनले वार्ता टोली बनाउनेसहितका तीन विकल्प अघि सारेका थिए । माओबादीले पार्टी एकता योजनाबद्ध रुपमा गर्ने भनेपछि महासचिव रामबहादु थापा बादल रोकिएका छन् । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ले योजनावद्ध रुपमा ‘प्रचण्ड माओवादीसँग पार्टी एकताबारे…विस्तृत समाचार »
सात नं. प्रदेशबारे कुनै निर्णय भएको छैन : मन्त्री रावल
१० वैशाख, डडेल्धुरा । नेकपा (एमाले)को अमरगढी नगर समितिको नगर अधिवेशनको उद्घाटन गर्ने क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री भीम रावलले नेकपा (एमाले)ले ७ नं प्रदेशका बारेमा कुनै निर्णय नगरेको बताएका छन् । नगर अधिवेशन उदघाट्नमा पुगेका मन्त्री रावलले सात प्रदेशको राजधानीका बारेमा विपक्षीले प्रचारबाजी मात्र गरेको आरोप लगाएका छन् । ७ नं प्रदेश प्राकृतिक र भौतिक रुपले आकर्षक भएको र आम समुदायबीचमा पनि भाइचाराको सम्बन्ध रहेकाले…विस्तृत समाचार »
क्रान्तिकारी शक्ति एक हुन प्रचण्डको आग्रह
१० वैशाख,काठमाडौँ,। एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले क्रान्तिकारी सम्पूर्ण शक्तिलाई एकताको लागि आग्रह गरेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस तथा तत्कालीन सोभियत सङ्घका नेता भिआई लेनिनको १४६औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले देशका सम्पूर्ण क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट र वामपन्थी प्रगतिशील शक्तिबीच एकता र ध्रुवीकरण आजको प्रमुख आवश्यकता भएको औलयाएका छन् । अध्यक्ष दाहालले शुभकामना सन्देशमा भने–“जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गरी समाजवादी…विस्तृत समाचार »
मधेस जागरणको नाम लिएर नयाँ शक्ति हिट गराउने बाबुरामको यस्तो काइदा
९ बैशाख २०७३
९ बैशाख, बारा । नयाँ शक्ति नोपलका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई यतिबेला मधेस जागरण अभियान अन्र्तगत मधेसका जिल्लाहरुमा घुमिरहेका छन् । तर उनको मधेस जागरण मधेसको हितमा भन्दा पनि उनको पार्टीको प्रचारप्रसारमा बढी देखिएको छ । उनले मधेसीले मधेसको मात्रै नभएर सिंगो नेपालको विषयमा सोच्नु पर्ने बताएका छन् । नयाँ शक्ति नेपालको मधेस जागरण अभियानअन्तर्गत उनी बाराको उत्तरझिट्कैया पुगेका छन् । भट्टराईले मधेसको मात्र…विस्तृत समाचार »
तर्सिए बादल , बैद्यको गोप्य प्लान फोनबाटै सुनेपछि
९ बैशाख, काठमाडौँ । एमाओवादीसँगको एकतामा पार्टीभित्रै मतभेद भएपछि एकताको पक्षमा छलफल बस्यो तर छलफलकै क्रममा बैद्यको गोप्य कुरा बादलले थाहा पाए । आन्तरिक पार्टी एकताको पहल गर्न वैद्य, गजुरेल, बादल र गुरुङ पटक पटक छलफलमा बसेका थिए तर कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बेला बैद्यको भित्रि प्लान सुनेपछि बादल तर्सिएका छन् । उनले २८ चैतमा ललितपुरको सानेपास्थित इन्टरनेशनल क्लबमा भएको आफूपक्षीय भेलामा वैद्यको प्लान…विस्तृत समाचार »
किन गए कमल थाापा न्युयोर्क
९ बैशाख । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा संयुक्त राष्ट्र संघको बैठकमा सहभागी हुन न्युयोर्क गएका छन् ।उप प्रधानमन्त्री थापाका साथ भ्रमणदलमा उनकी धर्मपत्नी र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव भरतकुमार रेग्मी छन् । मन्त्रीलाई स्वागत गर्न संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपाली प्रतिनिधि, न्युयोर्क स्थिति नेपाली महावाणिज्यदूतका प्रनिनिधि, एनआरएनका प्रतिनिधि, प्रवासी नेपाली एकता समाजका प्रनिनिधि जोन अफ केनेडी अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए । थापाले संयुक्त राष्ट्र संघको…विस्तृत समाचार »
अहिलेको संविधानले राष्ट्रिय एकता कायम राख्न सक्तैन् : नेता राई
९ वैशाख, पाँचथर । नेपाल हालसम्म जातीय राज्य भएको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका वरिष्ठ नेता अशोक राईले आरोप लगाएका छन् । सयौँ वर्षदेखि ब्राह्मण समुदायको मात्रै शासन सत्तामा वर्चस्व हुनुले अहिलेको राज्य नै एकल जातीय राज्य भएको उनको धारणा छ । उनले आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, दलित समुदायलाई पाखा लगाएर एउटै समुदाय सत्तामा रहिरहने र सोही समुदायले उत्कृष्ट भनेको संविधान कामै नलाग्ने भएको बताए । आन्दोलन…विस्तृत समाचार »
सरकारको आलोचना गर्न मै बित्छ काँग्रेस नेताको समय
९ वैशाख,विराटनगर । कांग्रेसका नेताहरु प्राय सरकारको आलोचना गर्नमै व्यस्त रहन्छन् आजकाल । आलोचना गर्नेक्रममै एक जना नेताले सरकाको काम सन्तोषजनक नभएको बताएका छन् । नेपाली काँग्रेसका पूर्वमहामन्त्री एवम् केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले वर्तमान सरकारको काम सन्तोषजनक नरहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । प्रेस युनियन विराटनगरले बिहिबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सिटौलाले अधिकांश समय सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 593 594 595 596 597 Older Last ›